Ntụ oyi maka Mini na Midi City Bus ma ọ bụ ndị njem nlegharị Bus na ndị nrụpụta | ABG
Usoro SZG, maka bọs obodo nke 6-8.4m na bọs ndi njem nleta 5-8.9m, AC maka obere bọs na midi
SZGK-ID (Obosara na 1826mm)
SZGZ-ID (Obosara na 1640mm)
SZGK-Ọ B IFR D-D / SZGK-II-D / SZGK-II / FD / SZGK-III-D (Obosara na 1826mm)
SZGZ-Ọ B IFR--D / SZGZ-II-D / SZGZ-II / FD (Obosara na 1640mm)
SZG usoro bụ ụdị nke n'elu n'ịnyịnya ikuku conditioner. Ọ metụtara na ụgbọ ala obodo 6-8.4m na bọs ndị njem nleta 5-8.9m. Iji nwee ohere kachasịsịsịsị nke ngwa nke ụdị bọs, e nwere ụdị obosara abụọ nke usoro SZG, na 1826mm na 1640 n'otu n'otu. Maka nkọwa ndị ọzọ biko lelee n'okpuru ma ọ bụ ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na sales@shsongz.cn maka nkọwa ndị ọzọ.
Nka na ụzụ nkọwapụta nke Bus A / C SZG Series:
(Dị (Nardị wara wara):
8 kW ma ọ bụ 27296 Btu / h
12 kW ma ọ bụ 40944 Btu / h
16 kW ma ọ bụ 54592 Btu / h
20 kW ma ọ bụ 68240 Btu / h
10 kW ma ọ bụ 34120 Btu / h
14 kW ma ọ bụ 47768 Btu / h
18 kW ma ọ bụ 61416 Btu / h
22 kW ma ọ bụ 75064 Btu / h
Ogologo oge ụgbọ ala akwadoro （Kwesịrị iji ihu igwe China）
AK33 (TM31 bụ nhọrọ)
210 nkp / r
270 nkp / r
330 nkp / r
380 nkp / r
Nlereanya (idedị Ya)
24 kW ma ọ bụ 81888 Btu / h
26 kW ma ọ bụ 88712 Btu / h
410CC / r
490 nkp / r
SZG-IX-D Nka na ụzụ Ozi SZGK-ID Nka na ụzụ Ozi SZGK-IF-D Nka na ụzụ Ozi
SZGK-II-D Nka na ụzụ Ozi SZGK-IIF-D Nka na ụzụ Ozi SZGK-III-D Nka na ụzụ Ozi
SZG-XD Nka na ụzụ Ozi SZGZ-ID Nka na ụzụ Ozi SZGZ-IF-D Nka na ụzụ Ozi
SZGZ-II-D Nka na ụzụ Ozi
4. Compressor VALEO ma ọ bụ AOKE bụ nhọrọ.
SZG Usoro R&D Azụ:
Site na mmụba nke ụkpụrụ ibi ndụ ndị mmadụ, nkasi obi achọrọ achọrọ na-arịwanye elu, na-eme ka ihe siri ike chọrọ maka ndị na-ekpo ikuku na OEM, gụnyere ọdịdị nke ikuku ikuku, ikike jụrụ oyi, mkpọtụ, wdg. e mere usoro SZG iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ nke ọma, dabere na nchebe nke gburugburu ebe obibi, ike na nchekwa ihe, mmelite arụmọrụ, mbelata ibu, obere mkpọtụ na ịma jijiji, nchekwa na ntụkwasị obi, na mmezi enyi. A na-emepụta ngwaahịa SONGZ mgbe niile iji gboo mkpa ndị ahịa.
Nkọwapụta Nzuzo zuru ezu nke SZG Series Bus Air Conditioner
1. Nkà na ụzụ condenser dị elu
A na-etinye condenser na windo, yana nnukwu mpaghara na-eche ikuku ihu, a na-ahazi ụzọ mbata ikuku n'akụkụ abụọ nke mkpuchi elu nke condenser ahụ, nke na-ebelata nkwụsi ike nke ikuku ahụ ma melite arụmọrụ ọkụ.
2. Fechaa imewe
Nhazi nke condenser na-enweghị ala shea windward structure. Ogologo ngwaahịa ahụ n'ofe anaghị agafe mita 2.5. Nhazi usoro ahụ kọmpat. Uche a dị n'elu na-eme ka ngwaahịa dị nha arọ, na olu dị obere.
3. Ngwa ngwa ọgbara ọhụrụ
SZGZ (warara ahụ) ngwaahịa, ala shei ihe a mere nke LFT + aluminum alloy ihe onwunwe. Tụnyere ndị ọzọ mejupụtara ihe, o nwere elu kpọmkwem kpọmkwem na ikwesi olu ike, ezi mmetụta na-eguzogide; mma nguzogide nguzobe, na ezi akụkụ kwụsie ike. Nguzogide ike ọgwụgwụ dị mma, ngụkọta nke ngwaahịa a na-ebelata ihe dịka 15%.
4. Mfe maka Mmezi
Ihe mkpuchi elu nke SZG usoro sara mbara ikuku nke ikuku condenser na-agbakwunye usoro njikọ njikọ. Ọ dịghị mkpa iwepu akwa mkpuchi niile mgbe ị na-ebu ụgbọ ala, nke na-echekwa oge ntinye. A na-etinye fan na-ekpo ọkụ site n'elu, ya mere, ọ dịghị mkpa imeghe ihe mkpuchi mgbe ị na-ewepụ fan. Mgbe evaporating moto na-rụziri, ọ bụ naanị na ọ dị mkpa imeghe n'akụkụ ekpuchi, nke dị mfe maka mgbe ahịa ọrụ.
5. Nzuzo maka Nchedo
Akụkụ nke dị n'elu ụlọ nke na-eme ka evaporator na-ekpochapụ njikọta nke abụọ, na ikuku ikuku nke nzukọ evaporator na-agbaso usoro ihe omimi dị omimi nke nwere ike ịbelata mkpokọta ngwaahịa ahụ, kamakwa gbochie ihe ize ndụ zoro ezo nke leakage mmiri na udu mmiri.
6. Wide nso nke ngwa
SZG zuru oke dabara adaba maka bọs si 6 ruo 8.4 mita na bọs ndị njem si na 5 ruo 8.9 mita. N'otu oge ahụ, ngụkọta obosara nke ikuku SZGZ (oghere dị warara) na oghere dị na ikuku ikuku bụ 180mm, nke dị 120mm obere karịa ahụ sara mbara, enwere ike itinye ya na ụgbọ ala pere mpe ma ọ bụ warara.
The SZG Series Bus AC Function Nkwalite ption Nhọrọ）
1. Plumbing na kpo oku technology
3. Na-adabara Ultra-low okpomọkụ
O nwere ike ime ka onye na-akwado ihe ma bulie usoro ahụ n'ụzọ ezi uche dị na ya, nke kwesịrị ekwesị maka ikuku ikuku bọs 10-12m n'oge ọkọchị na mpaghara oyi dị ka Northern Europe.
Nke gara aga: Batrị Igwe Ọdụdọ Igwe Igwe Maka Ọdụ Egwuregwu, na Nchịkwa
Osote: Ntụ oyi maka Bus, Coach, Bus School na Bus Bus